Israel oo sheegtay IRAN inay gantaalo keenayso Siiriya! • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Israel oo sheegtay IRAN inay gantaalo keenayso Siiriya!
Israel oo sheegtay IRAN inay gantaalo keenayso Siiriya!
August 29, 2017 - By: Abdirizak Shiino
Raysalwasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa ku eedeeyey IRAN inay wado dhismaha xarumo militari oo ka sameysaneyso dhulka Siiriya iyo Lubnaan.
Netanyahu ayaa eedayntan kasoo jeediyey Shir jaraa’iid oo uu Isniintii shalay si wadajir ah la yeeshay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres oo booqashadiisii ugu horeysay tan iyo intuu xilka qabtay ku yimid dalalka Bariga Dhexe.
Wax cadeyn ah masoo bandhigin Netanyahu, wuxuusa sheegay in Iran qorshaheedu tahay in gantaalada ay sameyso keento dalalka ay jaarka yihiin ee Lubnaan iyo Siiriya si ay usoo weerarto mustaqbalka dhulka ay heysato Israel.
Dowlada Iran ayaa kamid ah dalalka taageerada militari siiyey Dowlada Bashar Al Assad ee Siiriya iyadoo ciidamo iyo saraakiisha Tehran ay ka barbar dagaalamayaan militariga Siiriya ee dagaalka kula jira kooxaha ka dagaalamaya dalkaasi.
Israel ayaa mudooyinkii danbe dadaal weyn ugu jirta in indhaha caalamka ay kusoo jeediso Iran waxayna si weyn uga soo horjeeday heshiiskii Barnaamijka Nukliyeerka Iran oo ay la gashay dalalka reer Galbeedka.
Netanyahu ayaa sheega inay dalalka Carabta ah oo ay jaarka yihiin ay ka mideysan yihiin cabsida iyo shakiga ay ka qabaan awooda Iran ee kusii fideysa dalalka bariga dhexe.
Dhinaca kale Safarka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa kusoo beegmay xili xiisadi ay ka dhex taagan tahay UN-ka iyo Israel kadib markii hay’adaha Qaramada Midoobay ay dhaliil dusha uga tuureen maamulka Yahuuda falalka uu ka wado dhulka Falastiin.
Hay’adaha UNESCO ayaa dhawaan ku eedaysay Israel inay faro ba’an ku heyso dhulka taariikhiga ah ee reer Falastiin, gaar ahaan magaalada barakeysan ee Qudus, Hebron iyo Gaza. Warbixintaasi oo ay xukuumada Israel si weyn uga carootay.
Xoghayaha Guud Antonio Guterres ayaa sidoo kale sheegay inuu taageersan yahay in Shacabka Falastiin helaan dal u gaar ah oo jaar la ah Israel, arrintaasi oo ay kasoo horjeedo xukuumada u badan xisbiyada xagjirka Yuhuuda ee uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu.